စိမ့်စမ်းရေ: Bot အမေးအဖြေများ
ဒီပို့စ်လေးကတော့ MHU က sn1ff3rgod ရေးထားတဲ့အမေးအဖြေပို့စ်လေး.........
ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေ လည် ဖက်ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.........
Q : Bot ဆိုတာ ဘာလဲ ?
A : Bot ဆိုတာ အင်မတန်အကျိုးရှိတဲ့ ၊ အသုံးဝင်တဲ့ malicious program တစ်ခုပါ ။ အခုအချိန်မှာ auto ခိုင်းစေနိူင်တဲ့ Features တွေရှိနေပေမဲ့လဲ ၊ botnet admin ရဲ့ စေခိုင်းချက်အတိုင်း ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ် လုပ်ကြပါတယ် ။
Q : Botnet ဆိုတာဘာလဲ?
A : Botnet ဆိုတာ botnet admin ရဲ့command ပေး ထိန်းချုပ်ခြင်းခံထားရတဲ့ infected ဖြစ်နေတဲ့ computer များစွာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ network area တစ်ခုပါပဲ ။
Q : Bot တစ်ကောင်က ဘာတွေလုပ်နိူင်လဲ ?
A : ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ features တွေ bot တစ်ကောင်မှာ ပါဝင်နေတတ်ပါတယ် ။
* DDoS attacking
Q : Bot တွေကို ဘာတွေလုပ်ပါဆိုတာကို ဘယ်လိုခိုင်းစေမလဲ?
A : ပုံမှန်အားဖြင့် bot တွေကို user က IRC channel တွေကနေတစ်ဆင့် commanded လုပ်ထားပြီးသားပါ ။ command တွေက build in ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီ command တွေအတိုင်း bot တွေဟာလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြ ပါတယ် ။
Q : IRC channel ဆိုတာဘာလဲ ?
A : IRC ဆိုတာ Internet Relay Chat ပါ ။ IRC channel ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစတွအပြင် Group လိုက်ပါပြောဆိုဆက်သွယ်နိူင်ပါတယ် ။ IRC ကိုအသုံးပြုနိူင်ဖို့ ChatZilla, XChat or mIRC အစရှိတဲ့ chat client Software တစ်ခုခု လိုအပ်ပါတယ် ။ IRC server ကို connect လုပ်ပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ channel ကို join လိုက်ယုံပါပဲ ။
Q : Botnet တစ်ခုကိုရဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်နိူင်မလဲ ?
A : ပထမဦးစွာ ကျွန်တော်တို့ source code တွေနဲ့ အဲဒီ code ကို compile လုပ်နိူင်ဖို့ program တွေလိုအပ်ပါတယ် ။ Bot အများစုကို C++ နဲ့ ဖန်းတီးထားကြပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ မိမိကိုယ်ပိုင် botnet တစ်ခုရရှိလာဖို့ source code ကို compile လုပ်ဖို့အတွက်က programming experience အများရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူး ။ လိုအပ်တဲ့ source code ကိုရှာပြီး bot name ၊ IRC channel နဲ့တစ်ခြားလိုအပ်တဲ့ Information တွေကို edit လုပ်ပြီး ဖန်းတီးလိုက်မယ်ဆိုရင် မိမိ instruction နဲ့ အလုပ်လုပ်မဲ့ botnet တစ်ခုကိုရရှိလာပါ လိမ့်မယ် ။
Q : ဘယ်လို bot မျိုးကို အသုံးပြုမလဲ ?
A : ဒါကတော့ အသုံးပြုသူအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် ၊ ဘယ်လိုသုံးချင်တာလဲ ၊ ဘာအတွက်သုံးမှာလဲ ဆိုတာကိုလိုက်ပြီး ရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ။
Q : ကျွန်တော်တို့ အဲဒီကနေ money တွေရနိူင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ?
A : ဟုတ်ကဲ့….အဲဒီလို အစွမ်းသတ္တိတွေရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ visit referral sites (or) download files bots တွေကိုဖန် တီးနိူင်ပါတယ် ။ online မှာ ပုံမှန်ဈေးထက်အများကြီးသက်သာတဲ့ အကောင့်တွေကို ရောင်းနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါ၊ အဲဒီလိုမျိုးတွေကို သူတို့ရဲ့ bot တွေကနေရှိလာတာပါ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ botnet ကတစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာနဲ အမျှ professional IRC host ကို Transfer လုပ်ဖို့ ပိုက်ဆံတွေလဲ လိုလာပါလိမ့်မယ် ။
Q : ကျွန်တော်တို့ရဲ့ botnet ကို secure ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ ?
A : Offshore hosting ကအားလုံးထဲမှာ နံပါတ်တစ်ပါ ။ ဥပမာ - Sweden က dedicated hosting တွေပေါ့ ၊ ဘာလို့လဲဆို တော့ အဲဒီ နည်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hosted server ကိုမည်သူနဲ့မှ sharing လုပ်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့် network အကြီးကြီးဖြစ်လာသည်အထိ ကိုင်တွယ်ထားနိူင်လို့ပါပဲ ။ နောက်တစ်ခုက IRC channel မှာ password ထားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ bot ကလည်း undetected ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသေချာဖို့လိုပါတယ် ။
Q : လူအများစုကဘာအတွက် botnet ကိုအသုံးပြုကြတာလဲ ?
A : အဓိက ကတော့ botnet အများစုကို DDoS Attack အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ် ၊ တစ်ချို့ကတော့ ကြီးမားတဲ့ botnet တွေ ကိုတည်ဆောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ bot တွေကိုရောင်းစားရုံသက်သက်ပဲ အသုံးပြုပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးရှာကြပါတယ် ။
Q : Bot တွေဘယ်လိုပျံ့နှံ့နိူင်သလဲ ?
A : bot အများစုဟာ torrent site တွေနဲ့ warez board တွေမှာ အများဆုံးပျံ့နှံ့ကြပါတယ် ။ တစ်ချို့သော bot အများစုမှာ Auto-spread feature ပါလာပြီးသားပါ ၊ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ bot 50 လောက်ကနေ 150 ကျော်လောက်ကို အလိုလို ပျံ့နှံ့သွားနိူင်ပါတယ် ။
Q : ဘယ်လို bot အမျိုးအစားက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ?
A : Java bot တွေဟာ popular အဖြစ်ဆုံးနဲ့ undetectable အပြည့်အဝ ပေးနိူင်ဆုံးပါ ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ victim မှာ Java ရှိနေရပါမယ် ၊ အဲဒီလိုပါပဲ VB.Net နဲ့ရေးထားတဲ့ bot အတွက် .NET framework လိုပါတယ် ၊ VB6 နဲ့ရေးထားတဲ့ Bot အတွက် .ocx missing file ပြသနာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် C++ နဲ့ရေးထားတဲ့ bot တွေသာလျှင်ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးပါ ။
Q : ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bot ကို IRC server မှာ connect လုပ်ဖို့ ဘယ်လို့ configure လုပ်ရမလဲ ?
A : Bot အများစုမှာ instruction text file ပါလာပြီးသားပါ ။ တစ်ခြား ကွဲပြားတဲ့ bot အမျိုးမျိုးအတွက်လဲ tutorial တွေအများကြီးရှိပါတယ် ၊ မိမိ bot နာမည်နဲ့ရှာလိုက်ယုံပါပဲ ။ တစ်ကယ်လို့ မိမိ bot နဲ့ပတ်သတ်တာဘာတစ်ခုမှရှာလို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် (Only for bot coded in C++) Config.h file ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားနာမည်နဲ့ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး မိမိလိုအပ်သလို edit လုပ်နိူင်ပါတယ် ။
Q : Setup လုပ်ဖို့အာလုံးကလွယ်ကူပါသလား ?
A : ပုံမှန်အားဖြင့် configure ပြုလုပ်ပြီး compile လုပ်ဖို့ကလွယ်ကူပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ IRC server မှာ setup လုပ်ဖို့ ၊ secure ဖြစ်နေဖို့ ၊ bot တွေကို hidden အနေနဲ့ ရှိနေဖို့က beginner တစ်ယောက်အတွက်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး ။
ရေးသာသူ မြန်မာအိုင်တီ လူငယ်များ